Kungani i-Google Efihla amagama angukhiye Ilungele Abakhangisi | Martech Zone
Kubukeka sengathi wonke umuntu uyakhala futhi kwi-tizzy mayelana neGoogle ukunganikezeli ngemininingwane yegama elingukhiye elingokwemvelo ku-Analytics. Ngenkathi ngikholwa ukuthi kwehlisa inani le- analytics ngandlela thile, ngingasho ukuthi isenzo esihle esizosiza Abathengisi bokuqukethwe. Ngikubhalile esikhathini esedlule ukuthi I-SEO ifile futhi ngibhekile njengoba imboni ihambe kancane. Lokhu kungaba yisipikili sokugcina ebhokisini lomngcwabo.
Uma ngizwakala ngijabule ngayo, kungenxa yokuthi ngikhona. Ngibhale lokhu engxoxweni namakhasimende ethu ezentengiso, Ngakwesokudla ku-Interactive:
Isinyathelo seGoogle sokuvimba ukulandelwa kwawo wonke amagama angukhiye senza izimpilo zabakhangisi zibe nzima kakhulu, kodwa kungenzeki. Abathengisi basazokwazi ukuqapha amazinga wokuchofoza ngokusebenzisa idatha ye-Webmaster ukuqonda ukuthi ithrafikhi ephilayo iyithinta kanjani imizamo yabo yokukhangisa engenayo. Uma kukhona, lokhu kuyaqhubeka nokusenza sibe ngabakhangisi abangcono. Kufanele sigxile ekubhaleni okuqukethwe okubalulekile kuzithameli zethu nokulalela izithameli zethu - hhayi ukujaha amagama angukhiye, ukukhohlisa amasayithi, nokufuna izixhumanisi zokukhulisa ngokwethu amazinga ethu okusesha.
Lezi yizindaba ezimnandi ikakhulukazi zebhizinisi elijwayelekile elingenaso isabelomali sokutshala imali kumasu we-SEO wokukhiqiza okuqukethwe okunothe ngamagama asemqoka kuyo yonke iwebhu ukuze kufakwe ngobunyoninco izinga lokuqukethwe kwabo. Iningi lethu alikwazi ukuncintisana nezinkampani ezinkulu nemboni esikhule yaya ezigidigidini zamadola. Lapho kunenzuzo yezezimali yokukhohlisa, izinkampani zizokopela. Futhi imboni ibilokhu ikopela (futhi ikopela futhi ikopela). Abadlali abaningi bayakhohliseka ngamasu abo kepha kuyacaca ukuthi iGoogle akunjalo. I-Google ifuna ukuthi i-organic traffic ibe yi-organic, ingaqhutshwa izinkampani ze-SEO ezicebile ezinamabhokisi ama-sandbox ayizigidi zamadola ukuvumbulula izindlela zokukopela nokwenza amaklayenti abo abekwe ezingeni. Ushintsho lweGoogle lulimaza labo bantu - hhayi wena.
Futhi, ngenkathi ungeke ukwazi ukunikeza igama elingukhiye elithile kwithemba elithile, uzokwazi ukwazi ukuthi lowo muntu ufike ngokomzimba nokuthi usebenze kuliphi ikhasi. Ukwazi isihloko sekhasi lokungena okulindelwe nguwe okufika kusayithi lakho kuzokusiza ukuthi ukuqonde kangcono okuqukethwe okunikeza inani. Futhi ukwenza ucwaningo lwamagama asemqoka kanye nocwaningo lokuncintisana kusengathola amathuba okuthola nokubhala okuqukethwe okungeziwe okuzotholakala futhi kube nenani. Ukwenza kahle kosesho kuyisisekelo sanoma yiliphi isu lokuqukethwe, kepha ukubhala nokwabelana ngokuqukethwe okungcono (okubhaliwe, okukhulunyiwe nokubukwayo) kuzohlala kuphumelela ukwedlula izihloko zamakhasi ezi-tweaking noma ukuminyana kwamagama asemqoka ekhasini.
Igebe elinikezwe phakathi kwedatha yeWebmaster, idatha yokuqukethwe, nedatha ye-Analytics kufanele ikusize ucije ikhono lakho lokuthuthukisa okuqukethwe okuhle. Esikhundleni sokugxumela esigabeni samagama angukhiye we analytics, kufanele ngabe ungene emotweni ngesihloko sekhasi ukuze uqonde ukuthi iziphi izindatshana ezinikeza ithrafikhi eningi kunkampani yakho. Amagama angukhiye ayephazamisa futhi enza abathengisi abaningi babe ngamavila. Bavele baqhubeka nokubhala ukukhwabanisa ukushayela ithrafikhi eningi ngokususelwa kumagama angukhiye esikhundleni sokugxila kokuqukethwe okuphelele okuheha ukunakwa kakhulu.
Ayikho idatha empeleni eshiya umgodi emandleni akho wokuthuthukisa isu lokuqukethwe elimnandi. Usengabuyekeza idatha ye-Webmaster ukuqonda amagama angukhiye aqhuba okuqukethwe okuningi - kepha ungakusebenzisa kokuqukethwe okushayela ukubukwa nokuguqulwa okuningi. Ukuqonda umongo ozungeze amagama angukhiye obhala ngawo kunganikeza ukuqonda okungaphezulu kwethoni kulokho okudumile noma okungadumile.
Njengesibonelo, ukugxila 'kumagama angukhiye e-google anganikezwanga' kungangiholela kokuthunyelwe okumbalwa kwebhulogi mayelana nomkhuba nezinye izixazululo. Esikhundleni salokho, ngigxile lapha ukuthi kuzosiza kanjani abathengisi. Lowo mongo kufanele ekugcineni ubonakale ubaluleke kakhulu isu lami lokuqukethwe kunokumane uphonsa inhlanganisela yegama elingukhiye nxazonke! Umongo ozungeze amagama akho angukhiye kufanele ube yinto ozogxila kuyo futhi!
Kumele kuqashelwe ukuthi abanye abahlinzeki be-Analytics bathatha le ndlela, futhi. Bheka i-GinzaMetrics: Izici Ezintsha ekhelini Lezikhulumi ze-GinzaMetrics Platform Ukucinga Okuvikelekile Kwe-Google (Igama elingukhiye Alinikeziwe) Ukuvuselelwa.
Tags: I-google analyticsAmagama angukhiye e-googleigama elingukhiye alinikeziweayinikeziwe
Izizinda Zokumaketha Okuqukethwe kwe-Uberflip
U-Edward Lee Dawson
I-Oct 10, i-2013 ku-8: i-59 PM
Lokhu kungikhumbuza ukuthi itrackword tracker kaRaven ivale unyaka owedlule. Umfana we-SEO ngaphesheya kwetafula lami ubenezeluleko ezinhle zesiza sami. Enye yayigxile ekufakeni uphawu lapho ngokusho kwakhe, lapho amagama okusesha avela kuWebmaster ethola indlela eya esizeni sakho ngezindlela eziphilayo, khona-ke isu lakho lokubeka uphawu liyasebenza. Njengoba sikhumula amagama angenayo okusesha kuma-Analytics, kunezixazululo ezisebenzekayo kulokhu.
Okthoba 11, 2013 ngo-12: 41 AM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe. Thatha isikhathi sokuqonda kafushane uphinde uhlaziye ukumaketha kokuqukethwe futhi ungathola izindlela ezingalindelekile zokushayela imiphumela emihle yebhizinisi.
Okthoba 11, 2013 ngo-8: 44 AM
Ngibe nesikhathi esimnandi sokuyifunda .. Ngifundisa kakhulu .. Siyabonga ngokwabelana!
Okthoba 15, 2013 ngo-9: 58 AM
Ngiyavuma u-100%. I-SEO izalwe ngokwesaba futhi ingaqondi ukumaketha kwedijithali. I-Google ilinganisa inkundla yokudlala. Lesi isiqalo sokumaketha ukubuyela ekumaketheni kwe-inthanethi. Kunezinkampani ezingama-1000 zezinkampani ze-SEO ezijwayelekile kubathengisi abahamba phambili. Kepha bazibiza ngochwepheshe be-SEO. I-SEO iyamaketha. I-SEO akuyona inqubo ethile yobuchwepheshe obuphakeme okungaba yibo kuphela abangaphakathi be-elite. Kubukeka sengathi zonke izinkampani ze-SEO zizophoqeleka ukuthi zifunde ukumaketha i-101.
Jan 19, 2014 ku-11: 27 AM
Yebo kunjalo! Esikhundleni sokugxumela engxenyeni yamagama angukhiye we-analytics, kufanele ngabe sigxumela kumgwaqo ngesihloko sekhasi ukuze sazi ukuthi iziphi izindatshana ezinikeza ithrafikhi kakhulu enkampanini yethu. Ngicabanga nokuthi amagama angukhiye enze abathengisi abathile baba ngamavila. Abanye babo baqhubeka nokubhala "umbhedo" ukushayela ithrafikhi eningi ngokususelwa kumagama angukhiye esikhundleni sokugxila kokuqukethwe okuphelele okubaluleke kakhulu.
Jan 21, 2014 ku-11: 55 AM
Yebo idatha kufanele isize ukucija ikhono lokuthuthukisa okuqukethwe okuhle. Ngamakhasi okufika singagxila kakhudlwana kulokho izivakashi ezivame ukukubona / zikuthole kusayithi lethu.